‘स्टामिना’ कम भएर थकित महसूस गर्नुहुन्छ ? यी खानेकुरा खानुस् - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com ‘स्टामिना’ कम भएर थकित महसूस गर्नुहुन्छ ? यी खानेकुरा खानुस् - खबर प्रवाह
अहिलेको व्यस्त जीवनमा काम गर्न उत्तिकै शक्तिको आवश्यकता पर्छ । अझ कतिपय मान्छे त एक‍ैछिन काम गर्दा पनि थाकिहाल्छन् । किनकि, उनीहरूसँग पर्याप्त शक्ति हुँदैन । स्टामिनाको कमीले यस्तो हुने गर्छ ।
शरीरलाई चाहिने स्टामिना बढाउनका लागि कार्बोहाइड्रेट्स, भिटामिन सी, प्रोटीन र आइरन जस्ता तत्व चाहिन्छ । यी तत्वले तपाईंलाई दिनभरि तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ । हामीले केही त्यस्ता खानेकुराका बारेमा भन्न गइरहेका छौं, जसले गर्दा तपाईंमा स्टामिना थपिन्छ ।
तपाईंले बिहान एउटा केरा खाने गर्नुभयो भने तपाईंमा रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्छ र शरीरलाई ऊर्जा मिल्छ । साथै तपाईंलाई दिउँसो पनि आलस्य लाग्यो भने केरा खाने गर्नुस् । यसले फाइदा पुर्‍याउँछ ।
तपाईंले दैनिक चुकन्दरको रस पिउँदा मांसपेशीहरू बलिया हुन्छन् अनि शरीरले उर्जा पाउँछ ।
मुँगको दाल उमालेर वा अंकुरित गरेर खाँदा स्टामिना बढ्छ । भिटामिन सी र बीले भरपूर मुँगको दाल सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ ।
बदाममा क्याल्सियम, फाइबर, प्रोटीन र पोटेसियम पाइन्छ । यसको सेवनले स्मरणशक्ति बढ्छ । यसबाहेक खाली पेटमा भिजाएर सात/आठवटा बदाम खाँदा फाइदा पुग्छ ।
बिहान दैनिक जसो खाली पेट अंकुरित चना खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ । तीस ग्राम टुसा पलाएको चना खाँदा शरीरमा प्रोटीन, भिटामिन र पोषक तत्त्वको पूर्ति हुन्छ र स्टामिना बढ्छ ।
दाल तपाईंको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । दिनभरि आफूलाई ऊर्जाशील राख्न चाहनुहुन्छ भने बिहानको खानामा दाल खाने गर्नुस् । यसले तपाईंलाई ऊर्जाशील बनाउनुका साथै पेटको रोगबाट पनि फाइदा पुर्‍याउँछ ।
स्टामिना बढाउनकालागि पालुंगोको सूप, जुस वा सागपात खानु पनि फाइदाजनक हुन्छ । दिनबाट एकचोटि पालुंगोको सूप वा जुस पिउने हो भने यसले तपाईंलाई उर्जा दिन्छ ।
कोभिड नियन्त्रणमा आयुर्वेदको प्रयोगलाई बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव